Android 7.0 nougat yekuvandudza yesamsung galaxy noti 5 inotanga kusvika kueurope
Kuru Nhau & Ongororo Android 7.0 Nougat inogadziridza yeSamsung Samsung Cherechedzo 5 inotanga kusvika muEurope
Android 7.0 Nougat inogadziridza yeSamsung Samsung Cherechedzo 5 inotanga kusvika muEurope
Iyo Galaxy Note 5 ndiyo yazvino Ziva nhepfenyuro smartphone inowanikwa pamusika, uye chimwe chemidziyo iyo Samsung yakafunga kukwidziridzira kuApple 7.0 Nougat. Nekudaro, iyi ndiyo chete yechitatu Samsung smartphone yekugamuchira iyo yekuvandudza mushure meGPS S7 uye Galaxy S6 (uye nemisiyano yavo).
Sezvo iyo Galaxy Note 5 isina kuwanikwa muEurope kwenguva yakareba, zvine musoro kuti Samsung itange kusundidzira iyo Nougat kugadzirisa muUnited States . Iye zvino sezvo vese vatakuri veUS vaendesa iyo yekuvandudza, Samsung iri kutarisa kuunza Android 7.0 Nougat yeGalaxy Note 5 kune mamwe matunhu.
Tinogona kusimbisa iyo yekudzokorora yabuda muRomania, asi inogona kuwanikwa mune dzimwe nyika dzeEurope zvakare. Iyo Android 7.0 Nougat inogadziridza inorema mukati makatenderedza 1.3GB, saka ita shuwa kuti une yakakwana yemahara yekuchengetedza usati waedza kuikanda.
Zvakare, kana iwe & apos; uchishandisa Samsung Pay, saka unofanirwa kugadzirisa iyo app kune yazvino vhezheni usati waisa Android 7.0 Nougat pane Galaxy Cherechedzo 5 . Kunze kweNougat, iyo yekuvandudza inowedzera iyo Kurume chekuchengetedza chigamba, icho chakati kurei kufunga nezveGoogle yakatoburitsa mutori wenhau kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwemwedzi waMay .
Samsung Galaxy Cherechedzo 5
Twitch ikozvino inobvumira vashandisi veIfree kunyorera kune avo avanofarira kuyerera
Pano & apos; s nei T-Mobile uye Sprint & apos; zvakabatanidzwa 5G network inogona kuve isingamisike simba
Hondo dzeNexus! Google Nexus 5X vs Nexus 6 vs Nexus 5: specs kuenzanisa
Akanakisa masimbi kesi ye iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Spotify anoedza imwe nzira yekuendesa mimhanzi kune vashandisi veApple Watch
Microsoft & apos; s Dema Chishanu madhiri achasanganisira hombe Surface Pro 7, Galaxy Note 10, uye S10 discounts
T-Mobile inovhura neakanakisa Google Pixel 4a 5G kuvhura chibvumirano muUS